Air Senegal na-eburu Airbus A330neo mbụ nke Africa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Air Senegal na-eburu Airbus A330neo mbụ nke Africa
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • investments • Akụkọ na -emegharị na Senegal • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Air Senegal ewerela nnyefe nke mbụ A330-900 ya na larịị mmepụta nke Airbus na Toulouse. Onye na-ebu ụgbọelu bụ ụgbọ elu ụgbọ elu Africa mbụ na-efepụ ụgbọ elu ọhụụ nke Airbus nke na-egosipụta injinị teknụzụ kachasị ọhụrụ, nku ọhụrụ nwere ikuku na-ebuwanye ibu na usoro nku, nke na-adọta omume kacha mma site na A350 XWB.
Ejiri ụlọ obibi nwere klas atọ gụnyere 32 Business class, 21 Premium Plus na oche 237 Economy, Air Senegal na-ezube ịhazi A330neo nke mbụ ya n'okporo ụzọ Dakar-Paris na ịmalite ịzụlite usoro ntanetị na ogologo oge.
The A330neo bụ ezi ọgbọ ọhụrụ ụgbọ elu ụlọ na nke kacha mma-ere obosara ahu A330 atụmatụ na leveraging na A350 XWB technology. Kwadoro site na kacha ọhụrụ na-apụta-Royce Trent 7000 engines, na A330neo na-enye na-enwetụbeghị ụdị larịị nke arụmọrụ - na 25% ala mmanụ ụgbọala ọkụ kwa oche karịa gara aga ọgbọ asọmpi. Ejiri ọdụ ụgbọ elu nke Airbus kwadebere ya na Airspace, A330neo na-enye ahụmịhe ndị njem pụrụ iche na ohere nke onwe ndị ọzọ na usoro ọhụụ ọhụụ ọhụụ na njikọta.
ụlọ ọkụ klas azụmahịa ụlọ ụgbọelu ndị asọmpi Njikọta nnyefe design Economy klaasị akụ na ụba arụmọrụ engines ntụrụndụ atụmatụ egosi ofufe site mmanụ in ụgbọ elu ntụrụndụ n'ime ụgbọ elu ọhụrụ akara ọdụdọ ogologo ala ọkara network ọgbọ ọhụrụ -enye Na-arụ ọrụ Paris njem onye atụmatụ kwadoro omume adịchaghị mmepụta Na-apụta Rolls-Royce ụzọ oche oche n'ire Senegal ohere usoro technology Toulouse XWB